Taliyaha Xoogga Dalka Somalia Jeneraal Indhoqarshe iyo Abaanduulaha XDS Jeneraal C/risaaq Khaliif oo maalintii 3aad ku xaniban Garoonka Diyaaradaha Kismaayo – idalenews.com
Wararka naga soo garaya Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaay tibaxayaann in Maalinti labad ay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ku xayiran yihiin Saraakishi ugu saraysay Ciidamada Xogga Dalka Somaliyeed.
Saraakisha lagu xanibay Garoonka Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah Taliyaha Guud ee Ciidamada Xogga Somalia Gen Indhoqarsho iyo Abaandulaha Ciidamada Xogga Somalia Gen Cabdirisaaq Khaliif Cilmi.
Saraakiishan ayaa waqtiyo kala duwan soo garay garoonka Kismaayo waxaayna rabeen in ay gudaha u galaan Magaalada kismaayo waxaana arinkaasi ka biyo diiday Maamulka Jubbalaand oo ka shanaya Ciidamada Amisom ee Kenya.
Col Maxamed Bulle oo ka tirsan Ciidamada Xogga Somalia oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu sheegay in Sarakiishan aysan dib u laban doonin ila ay gudaha u soo galan magaalada Kismaayo.
Col Bulle waxaa uu intaasi ku daray in saraakishaan ay qaban amar ah in ay u tagaan Ciidamada Xogga Somaliyeed ee ku sugan kismaayo una hambaliyeeyaan howlaha culus ee ay ka hayaan Kismaayo.
Xanibada Saraakiishan ciidan ayaa imanaysa xili maalinti shalay ahayd lo diiday in ay yimaadan Magaalada Kismaayo wafdi heer wasiiro ah oo ay hogaaminayeen Wasiirada Gaashandhiga iyo Warfaafinta Dowlad Fadaralka Somalia.
Dhanka kala waxaa Heerki ugu xumaa maraya xiriirka u dhexeya Maamulka Jubbaland iyo Dowlada Fadaralka Somalia waxana markasta la filan karaa in labadaasi dhinac uu dhexmaro dagaal lagu hoobto.